Mazuva gumi nematanhatu ekurwisa - Kubvisa Mhirizhonga Kune Vakadzi Vakaremara – alugha
Mazuva gumi nematanhatu ekurwisa - Kubvisa Mhirizhonga Kune Vakadzi Vakaremara
Mhirizhonga inoitwa nevanhukadzi inyaya yakanetsa muZimbabwe sezviri kuitika pasi rose. Vanopfuura mumwe chete pavakadzi vatatu (15 - 49) vakasangana nemhirizhonga (35%) nepo mukadzi mumwe pavashanu (17%) akasangana nemhirizhonga pabonde. Muzviitiko zvakawanda, vatadzi vacho vanobatana padhuze. Mhirizhonga inoenderana nevanhukadzi - kunyorwa kwekodzero dzevanhu kwakanyatsoratidzwa, kupokana kwehutano hweveruzhinji, uye chipingaidzo mukutora chikamu kwevanhu, vezvematongerwo enyika, nezvehupfumi. Iyo inokanganisa kuchengetedzeka, chiremerera, uye hutano hwakakwana, hutano pamwe nehupfumi hwevanhu vanohuwana. Zvidzidzo zvinoratidza kuti vakadzi nevasikana vakaremara vanogona kusangana nemhirizhonga kakapetwa kagumi kupfuura vakadzi nevasikana vasina hurema. Vanokanganisa vanogona kuvanangisa nekuda kwekufamba kwavo kushoma kana nzira dzekutaurirana. Munguva yemazuva gumi nematanhatu ekurwisa mhirizhonga muna 2020, UNESCO neSpotlight Initiative Implementing Partner, iyo Federation of Organisations of Disabled People in Zimbabwe (FODPZ) iri kukurudzira kuti GBV iparadzwe nevakadzi nevasikana vakaremara. Mavhidhiyo matatu eChirungu, Shona, neNdebele anofambisa mashoko akakosha ekusimudzira ruzivo nekugumisa GBV kuvakadzi nevasikana vakaremara. https://en.unesco.org/news/unesco-sardc-formulate-youth-development-and-social-innovations-programmes